Android Nougat no anarana ho an'ny Android N amin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Android N izao dia Android Nougat amin'ny fomba ofisialy
Izahay dia efa miandry ireo herinandro lasa izay Google manapa-kevitra amin'ny farany amin'ny anarana iray ho an'ny Android N. Vaovao ananantsika hino fa i Nutella ihany io ny anarana famaranana, saingy tsy mbola nisy mandraka androany isika vao afaka miantso ilay kinova Android vaovao izay nantsoina hoe Android Nougat ihany.
Google dia nanendry tamin'ny fomba ofisialy ny Android N ho Android Nougat. Io no anarana hojerentsika saika isan'andro rehefa fantatsika izany vaovao izany rehefa tonga ny kinova farany amin'ity fahavaratra ity. Ny hany zavatra tsy anananay dia ny laharana farany, saingy misy ifandraisany amin'ny iray amin'ireo sakafo matsiro ho an'ny Krismasy, ny nougat.
Ireo an'ny Mountain View isaky ny miantso kinova lehibe izy ireo nanangana sarivongana vaovao izy ireo Android mifandraika. Tamin'ity indray mitoraka ity dia anjaran'ny android maitso no voahodidin'ireo sombin-javatra nougat matsiro izay ho hitanao eo akaikin'ireo kinova Android hafa. Ny zavatra mahatsikaiky dia ny fiatrehantsika ilay kinova, ao amin'ilay sarivongana, izay natokisan'i Google tsy dia fitiavana loatra, na, araka ny lazain'ny olona iray, ezaka kely kokoa.
fampidirana #AndroidNougat. Misaotra anao, izao tontolo izao, noho ny hevitrao mahafinaritra rehetra! #AndroidNReveal pic.twitter.com/7lIfDBwyBE
- Android (@Android) Jona 30, 2016
Tsy hitsikera izahayAnkehitriny satria tsy dia tena izy ireo tany am-boalohany, saingy heverinay fa ny fiantsoana Android Nougat dia tsy manome hevitra marobe, na dia azo antoka aza fa misy mpamorona faharanitan-tsaina mahay mamorona sary vongana hafa mitovy amin'ny siramamy sy kaloria be dia be. Raha tokony handika azy io amin'ny teny Espaniôla isika dia afaka miantso azy io ho Android Nougat, ka farafaharatsiny farafaharatsiny mahafinaritra izany raha ny fahita azy.
Farany, efa afaka miandry isika ny kinova farany dia tonga avy amin'ny Android Nougat, izay azo inoana amin'ny faran'ny fahavaratra dia afaka miaraka amintsika, satria ny fitaovana Nexus roa izay havoaka dia hisy ity kinova ity. Faharetana kely, satria tsy maintsy fantarintsika ny anarana, ary afaka manohy manana faharetana ho an'ireo mpanamboatra izahay hizara izany amin'ny ekipan'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Android N izao dia Android Nougat amin'ny fomba ofisialy
Ny famaritana HTC 'Marlin' Nexus dia tafaporitsaka: efijery 5,5 QHD sy RAM 4GB